Semalt: Kukosha Kwokuti Usabvisa Zvose Zenyika DzeIndaneti
Ndezvemunhu kukanganisa. Ndicho chikonzero nei zviri pachena kuti zvimwe zvinhu zvinoda kuitika munguva pfupi kupfuura mberi, zvichiri kuregererwa. Mune mamwe mazwi, kudzivisa nguva dzose kunopedza. Kunze kwezvinhu zvose kunze kweIndaneti mazita anokosha kunyanya kana uchitarisana nekutangira blog kana webhusaiti - модульная система гаврош. Kana iwe uchida kuti urongwa hwakanaka uye hwakanaka, saka izvi hazvifaniri kuregererwa. Zvose zvakafanana, zvine mabhuku maviri. Kutanga, iyi inofambisa dhamba dhese inokosha sezvinoitwa nhamba yevhesi yepamusoro uye nguva inoshandiswa pane peji yewebhu. Chechipiri, iyo inoderedza kuputika kwechikwata ichi paunowedzera kuwanda kwevanodzokazve (vanoshandisa).
Sezvo vashandisi vewebhu vakashandisa deta iyi kuti vaongorore uye kuvandudzwa, pane chido chokuti iwe usavhara IP yako. Chinhu chipi zvacho chinopesana neizvi chinoreva kuparadzwa kwako kukwanisa kutora zvidzidzo zvinokosha - kubva ku analytics.
Pano panotungamirirwa naFrank Abagnale, we Semalt Mutungamiri Wekubudirira Kwevatendi, pamusoro pekutsvaga kero ye IP kubva Google Analytics.
Danho rekutanga: tsvaga IP yako kero
Nhanho iyi inenge yakananga, uye Google iripo kuti ibatsire. Ingotangai Ndeyani IP address yangu. Maminitsi mashoma mitsva ichaonekwa, uye pamusoro pemigumisiro, uchaona IP.
Danho repiri: enda kumatsvina
Izvi ndizvo zvaunofanira kuita zvinotevera:
Enda kuGoogle Analytics uye wega kupinda kuAngeri yako. Paunenge watopinda, unofanirwa kuona imba yeAkhasi.
tsvaga pa 'Admin' tag pane imwe nzvimbo pamusoro pekufamba menu. Izvi zvichakuendesera kune imwe skrini
mushure mokunge uchitora danho riri kumusoro, sarudza iyo nhoroondo iyo nzvimbo yako inogara yakavakwa
tsvaga uye sarudza nzvimbo (nzvimbo) iyo iwe waunoda kuisa kunze kwehupoti yako ye analytics.
sarudza rimwe rematepa akanyorwa ma filters uye uite imwe (kuwedzera firiji itsva).
Nhanhatu nhatu: kushandisa soro
Kufunga kuti iwe hauna kuita izvi zvisati zvaitika, ona zvinotevera:
kugadzira firiji itsva yemufananidzo
funga nezvezvakasiyana asi zvakajeka kuyeuka zita refaira. Edza chimwe chinhu chakavharwa neI IPs yakavharwa
sarudza yakagadzirirwa-firisi uye enda mberi nhanho inotevera
kuita shanduko kumadonhesi echipiri pasi pasi zvokuti inoti 'kufamba kubva paIndaneti.'
mutsara muIndaneti yako yeIndaneti sezvawakaiona sezvinoratidzwa pakutanga kwegwaro iri.
Ndizvo zviri nyore. Iye zvino zvawakatora izvi, iwe une rusununguko yekufambisa kuburikidza newebsite yako pasina kunyanya kunetseka pamusoro pechinhu chipi zvacho chinoshungurudza report yako ye Analytics / data. Zvakadini nekunaka kwako? Mitengo yekusabvisa kero yePI kubva kuGoogle's Analytics iri nyore uye haidi kuti iwe uve guru guru. Ingoitevera matanho akanyorwa, uye wapedza:
Danho rimwe - regai Google ikubatsire kuziva PI yako yakasiyana
Danho rechipiri - famba nenzira yemenyu yebhuku uye uite tsika yemafuta
Danho rechitatu - shandura tsika yechirongwa kuti usabvisa purogiramu yako yePI uye chengetedza zvose zvashandurwa.